Hasirittoha ikkiro, bortajete giddo leellitinokki borangichinni wedeweelcho xaadanno wote loosate amuraatikki horoonsirinota gadete riqiwooshshe hoola dandaatto.
Qoleno borangichu riqiwame LibreOfficehoronsiranchi reqeciimo aani borangichuwa lella gufisanno.
Riqiwote shae loosaansi
Baala wote buuxote saaxine
Leelishalbu calli buuxote saaxine
Borangichu bayisiisamono hoogono borangichu riqiwamme leellishalbu aana calla ikkitanno.
Borangichu leella hoogiro calla, borangichu riqiwamme leellishalbu aana calla ikkitanno.
Borangichu leella hoogiro borangichu riqiwamme leellishalbu aana nna atamamme yannara calla ikkitanno.
HTML borangichu qineessu nna Kaimu bua
Borangicho doori nna HTML leellate borangichu bikka nna Kaimu bua koodde.
Taaltinokki borangichuwa calla
Title is: Borangichuwa